Coin Mixer - Blockchain News
Janoary 19, 2018 Admin
Ahoana no Cryptocurrency Mixers sy Anonymous mpanjifany Work
Zavatra Nifanipaka Nataon'i bitcoin dia fa na vahoaka sy ny tsy fantatra anarana. Varotra rehetra ao amin'ny tambajotra dia mora traceable, fa fanalahidy-bahoaka dia tsy mifandray amin'ny ny tompony’ tahirin-kevitra. Ny teboka amin'ny izay mety mifamadika bitcoin amin'ny fiainana manokana ny famantarana dia rehefa misy mpampiasa cashes avy, mampiasa ny kitapom-batsy, na ny fifanakalozana. Misy, na izany aza, fomba maro hiarovana ny anarana ao amin'ny blockchain.
Ny cryptocurrency Mixer dia fitaovana ho an'ny fanatsarana ny anarana ny cryptocurrencies. Ny algorithm dia tsotra fa ny mpisera-mandefa ny cryptocurrency ny Mixer ny adiresy izay voasoratra anarana mpampiasa ho an'ny tsirairay manokana. Dia avy eo ny vola madinika voaharo varotra hafa, na zaraina amin'ny olona ana hetsiny maro izay an'ny mpanjifany ny Mixer. Raha vao ny dingana vita, “madio” BitCoins dia nafindra tany amin'ny napetraka mialoha ny fitehirizana, na niverina tany amin'ny mpandefa na ny tompon'ny vaovao.
Io teboka dia bitcoin kitapom-batsy izay nitana $10,000 fandoavam-bola amin'ny vidim-panavotana teo anoloan'ny mpijirika izay manana ny tantara dia nanomboka nandefa ny vola toother mpanjifany. Rehefa nanomboka nifindra ny vola throughbitcoin kaonty, tsy ela dia namely ny tena mavitrika kitapom-batsy, sy ny famindrana an-dafin'i mpanjifany izany dia sarotra ny hamatotra ny mpijirika Raha ny marina, mamaritra izay varotra lasa izay ahitana teboka vola avy amin'ny mpijirika’ kitapom-batsy dia afaka ny ho azo, ary izany no hevitra. Voafaritr'ireo fotsiny izahay 2,373transactions eto, fa bitcoin fampifangaroana ny dingana dia afaka hiampita ana hetsiny.
Ny fizarana ny vola eo amin'ny mpanjifany maro mahatonga azy tsy afaka hametraka ny rohy eo amin'ny mpandefa sy ny mpandray. Ny mpampiasa dia afaka handrava ny raharaham-barotra koa ny torohevitra ho anaram-piangonana, mba hanafina ny tena vola.
The mixers’ tompony hitandrina ny 0.5-3% barotra saran'ny noho ny asa. Zava-dehibe ny mahatsiaro, na izany aza, fa raha mandefa ny vola madinika ny hafa olona kitapom-batsy, mety tsy hahazo azy ireo hiverina.
Mampiasa ny Mixer dia tsy dia mitovy amin'ny fampiasana ny sehatra fifanakalozana. Tokony hiditra ny adiresy izay tianao mba handefa ny mifangaro BitCoins, nametraka ireo sara (izany mafy heriny ny raharaham-barotra hafainganam-pandeha), sy ny asa fanaovan-gazety “Continue.” Manaraka, dia ho niova ny pejy miaraka amin'ny Mixer ny adiresy izay tokony handefa ny BitCoins eo amin'ny toerana voalohany.
Izany no manan-kery ho an'ny adiresy 24 ora. Taorian'ny fotoana dia ny, ny raharaham-barotra dia tsy ho afaka hatao ampiasaina. Io toe-javatra io voalaza ao amin'ny taratasy dia manome antoka fa ny orinasa ny ny mpanjifa.
Noho izany, mandefa bitcoin isika ary miandry ny raharaham-barotra amin'ny vodi-. Ny ekipa amin'ny fanompoana mampanantena hatrany varotra. Raha vao ny raharaham-barotra dia nanamafy ny fanompoana, ny hafainganam-pandeha dia miankina afa-tsy amin'ny enta-mavesatra eo amin'ny tambajotra bitcoin.
Cryptocurrencies Monero, Zcash, ary Dash
am-boalohany, nisy tsy fantatra anarana roa cryptocurrencies-Monero sy Zcash. John McAfee sy Edward Snowden nilaza fa ireo no cryptocurrencies 'ny ho avy. Mamela ny mpampiasa vola madinika mba hanafina soritra rehetra ao amin'ny blockchain ary manilika ny mety hisian'ny fifanakalozana rehefa nahita. Zcash no nahavita izany amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana iray antsoina hoe cryptographic zk-Snark (aotra-fahalalana porofo), ary Monero dia ampiharina ny peratra sonia teknolojia (ny hafatra nosoniavin'ny izany no tohanan'ny olona iray ao anatin'ny vondron'olona manokana, saingy computationally infeasible hamantatra izay ny vondrona mpikambana’ fanalahidy dia nampiasaina mba hampisy ny sonia). Zcash sy Monero hahazoana antoka ny anarana ny vaovao mikasika ny fifanakalozana, kitapom-batsy mizana, sy ny fivezivezen'ny vola madinika.
Cryptocurrency Dash koa hiarovana rehefa untraceable varotra. Ny teknolojia dia manome fahafahana ireo mpampiasa PrivateSend mba hifangaro ka hivadika ny raharaham-barotra inputs hidina any fitsipika anaram-piangonana. Ny kitapom-batsy avy eo mandefa fangatahana ho “masternodes” izay tompon'andraikitra amin'ny fampifangaroana.
Inona no mety ho hafa ny vola madinika mixers? Eritrereto manokana mpanjifany amin'ny ambony ny anarana, oh, metaly. Misy ihany koa ny mpanjifany izany, izay misy naorina-in bitcoin fampifangaroana safidy.
In 2014, Cody Wilson, crypto mafana fo iray ihany koa izay namorona 3D-pirinty basy, niaraka tamin'i Amir Taaki, Nampiditra ny Dark tetikasa Wallet-a navigateur plugin sy Ubuntu mpanjifa.
Dark Wallet no nanao an-tampon'ny CoinJoin, izay dia midika fa ny rehetra dia samy hafa sy ny varotra izany azo atao ny mahita hoe iza no voalohany manana cryptocurrency. Ny mpampiasa kokoa ny kitapom-batsy, ny tsara kokoa ny anarana.
Mpanjifany ao anatin'ny Anonymous Network
Ao amin'ny tranonkala Darknetmarkets, misy afaka mahita ny mpitarika ny fiarovana ny fiainana manokana, rehefa naniraka vola amin'ny alalan'ny tambajotra Tor. fa izay, ny mpampiasa maromaro mila mpanjifany ao na tsy fantatra anarana sy ny tambajotra misokatra, ny Tor mpitety, ary ny fampifangaroana asa manohana Tor.
Coin Mixer fampifangaroana Services
Bebe kokoa momba ny foto-kevitra Wallet
Previous Post:Blockchain News 19 Janoary 2018
Next Post:Dia Bitcoin ny Tetikasa ny US Intelligence ?